China Six Axis Robot Series ifektri kanye nabaphakeli | UDaya
Eziyisithupha-eksisi irobhothi uchungechunge JZJ50A-270, 100A270, 50KG
Uchungechunge lwama-axis ayisithupha JZJ06A-090 6KG
Eziyisithupha eksisi irobhothi uchungechunge JZJ10A-160 10KG
Eziyisithupha eksisi irobhothi uchungechunge JZJ20A-180 20KG
Isingeniso esifushane se-robot yokuphatha okuzenzakalelayo:
1. Irobhothi elilayishayo nelothulwayo linebanga elikhulu lokulayisha lisuka kumakhilogremu amaningana liye kumakhulu amakhilogremu ambalwa
2. Ijubane eligijimayo liyashesha futhi liyaguquguquka;
3. Isenzo esiguquguqukayo, singaqedela imisebenzi eyinkimbinkimbi yokuphatha nokulayisha nokulayisha;
4.Ukuthembeka okuphezulu nokugcinwa okulula.
5. Ingakwazi ukuqedela ukunyakaza kwesikhala esinobukhulu obuthathu bezinto ezisindayo njengokuqonda, ukuthutha, ukugumbuqela, ukumisa idokodo njalonjalo. Inikeza ithuluzi elihle lokuphatha nokuhlanganisa izinto ezintweni ezingaphandle nakulayini nokuhlanganiswa kwezingxenye zokukhiqiza. Irobhothi elilayishayo nelilayishayo linganciphisa amandla okusebenza futhi linikeze nokuphathwa kwempahla okuphephile. Ngasikhathi sinye, ingahlangabezana nemvelo ekhethekile, njengezindawo eziyingozi lapho abasebenzi beworkshop abangakwazi ukuqhuma bengena khona, futhi inikeze izixazululo zohlelo.
6. Ngezinto ezahlukahlukene ezingezona ezejwayelekile, irobhothi lingabamba ubujamo obuhlukahlukene bento yokusebenza, futhi opharetha angasuka kalula bese efaka umthwalo, anyakaze, ajikeleze, ajikele phambili futhi aginqike. Futhi umthwalo ubekwa ngokushesha nangokunembile endaweni esethwe ngaphambilini. Ngayo, umuntu oyedwa angasebenza kalula izinto ezingasuswa ngabantu abambalwa kuphela.
Amapharamitha wezobuchwepheshe ayisithupha we-Axis Robot Series
Yiziphi izinzuzo ezinkulu zamarobhothi ezokuthutha?
1. Irobhothi elithokozisayo neliphatha kalula lihlala isikhala esincane, esivumelana nokuhlelwa kukalayini wokukhiqiza endaweni yokusebenzela yamakhasimende, futhi lingagcina indawo enkulu yokugcina impahla. Futhi irobhothi lingabekwa ngempumelelo endaweni encane.
2. Irobhothi elethayo nelithutha linesakhiwo esilula nezingxenye ezimbalwa. Ngakho-ke, izingxenye ezisele zinenani eliphansi lokwehluleka, ukusebenza okuthembekile, ukugcinwa okulula nezingxenye ezimbalwa zokugcina.
3. Ukusetshenziswa kwamandla kwe-palletizing nokuphatha i-robot kuphansi. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, amandla okubamba nokudlulisa irobhothi angaba ngu-26KW, kanti amandla erobhothi elithambile angaba ngu-5kW. Yehlisa kakhulu izindleko zokusebenza kwamakhasimende.
4. Irobhothi elisebenzisayo neliphatha kalula linokusebenza okunamandla. Lapho usayizi, ivolumu, ukwakheka komkhiqizo wekhasimende nokuma nosayizi we-pallet kushintsha, ukukhiqizwa okujwayelekile kwekhasimende ngeke kuthinteke ngoshintsho oluncane kusikrini sokuthinta. Ukwakhiwa kabusha kwe-palletizing nokuthutha i-robot kuyinkinga kakhulu, futhi akukwazi ukufezeka.
5. Zonke izilawuli zerobhothi eligudlukayo neliphatha lingasebenza esikrinini seKhabhinethi yokulawula, futhi ukusebenza kulula kakhulu.
6. Uma nje isiqalo nendawo yokubekwa kunqunywa, indlela yokufundisa kulula ukuyiqonda.
Langaphambilini Uchungechunge lwe-Axis Robot
Olandelayo: Uchungechunge lwe-Welding Robot
Uhlobo lwe-STC Series C “Vula i-Double Point Cran ...
Wokushaya Izingxenye 7
C Cindezela Isivinini Esiphezulu
Solid Uzimele Single Crank Mechanical Cindezela (STD ...